Wararka - Qalab joogta ah | Wararka Gadget (Bogga 3)
Sony waxay joojineysaa PS Vita si rasmi ah Spain
PS Vita ayaa si rasmi ah uga joogsatay Spain. Ogow wax badan oo ku saabsan go'aanka ay shirkaddu ku joojisay suuqgeynta qalabka lagu iibiyo dalkeenna.
PUBG waxay u timaadaa aaladaha mobilada si ay ula kulmaan guusha Fortnite
Tencent wuxuu u taaganyahay Fortnite isagoo si layaableh oo dhaqso leh u bilaabay ciyaarta fiidiyowga ee PUBG ee loogu talagalay mobilada.
IPhone X's Face ID ayaa laba sano ka horeysa tartanka
Sidoo kale, waxay ku xaqiijinayaan Reuters, si cad oo toos ah: Aqoonsiga Wajiga ee iPhone X waa laba sano ka hor ...
Ciladaha IOS 11 waxay ka muuqdaan xitaa ogeysiisyada shirkadda
Fiidiyowgii ugu dambeeyay ee Apple wuxuu mar kale na tusayaa sida xitaa Apple lafteeda aysan u awoodin inay xalliso cillad ku jirta IOS 11 markii la duubayay dhawaaqeeda ugu dambeysay.
Plattsburgh Ayaa Noqotay Magaaladii Ugu Horeysay Ee Mamnuucda Macdanta Seeraar
Magaalada Plattsburgh waxay mamnuucaysaa macdanta Bitcoin iyo waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies'. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan magaaladan oo noqotay tii ugu horreysay ee mamnuucda hawshan adeegsiga tamarta badan awgeed.
Thanks Duolingo waxaan ku baran karnaa Klingon si fudud
Haddii aad tahay taageere taxanaha 'Star Trek' oo aad marwalba jeclayd inaad barato Klingon laakiin aad u haysay rabitaan ama inaad ogaato sida loo sameeyo, mahadsanid Duolingo si fudud ayaan u samayn karnaa
Spotify wuxuu bilaabaa tijaabinta kaaliyeheeda codka
Spotify waxay tijaabineysaa kaaliyeheeda codka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshooyinka barnaamijka qulqulka ee horey u soo bandhigaya kaaliyaha koowaad ee ka dhigaya isticmaalka dalabka mid aad u fudud.
Kaarka bangiga ee 'Amazon debit card' ayaa hadda laga heli karaa Mexico
Shirkadda weyn ee Amazon waligeed ma joogsaneyso inay naga fajaciso imaatinka alaabooyin cusub oo kiiskan waxaan leenahay cusub ...
Shirkad ku takhasustay iibinta BlackBerry-yada loogu talagalay dambiyada abaabulan ayaa xiran
Shirkadda Phantom Secure, ayaa mas'uul ka ahayd wax ka beddelka BlackBerry si ay u ahaayeen aalado aan la ogaan karin goobta iyo wadahadallada lagu fuliyay codsiyada loogu talagalay ujeeddadaas.
Microsoft waxay xaqiijineysaa in Xbox One X uu soo bandhigi doono FreeSync 2
Microsoft waxay si rasmi ah u xaqiijisay in Xbox One X uu yeelan doono tiknoolajiyadda FreeSync 2 oo noo oggolaan doonta inaan ku raaxeysano ciyaaro badan oo ka wanaagsan.
Stephen Hawking wuxuu ku dhintey da'da 76
Khabiirkii caanka ahaa ee cirbixiyeennada caanka ahaa ee Stephen Hawking ayaa subaxnimadii maanta oo ay taariikhdu tahay 14 Marso, 2018 ku dhintay gurigiisa oo ku yaal Cambridge isaga oo ay weheliyaan eheladiisa.
Philips Hue-kii ugu horreeyay ee bannaanka ah ayaa horeyba loo shaaciyey
Philips Hue: Nalalka banaanka ee cusub ayaa horay loo sii shaaciyay. Raadi wax badan oo ku saabsan nalalka cusub ee Philips ee dhowaan suuqa soo galaya.
Netflix ayaa ka digaya, codsigeeda lagama heli karo Switch sababtoo ah Nintendo
Shirkaddu waxay ka digaysaa, Netflix diyaar uma ahan Nintendo Switch maxaa yeelay nooca Japan ayaan dan yar ugu jirin.
2001 HAL: A Space Odyssey oo dib loo soo rogay mahadnaqa Alexa
Waxaan haynaa ogeysiiska xiisaha leh ee maalinta, waxaan ku tusineynaa sida ay u rogeen 'Alexa' ee loo yaqaan 'HAL' laga soo bilaabo 2001: A Odyssey space.
Fortnite Battle Royale wuxuu ku socdaa taleefannada gacanta
Fortnite Battle Royale waxaa lagu sii deyn doonaa taleefannada gacanta. Raadi wax badan oo ku saabsan bilawga ciyaarta caanka ah ee aaladaha moobaylka dabayaaqada sanadkan.
EBay Superweekend waa halkaan, ka faa'iideyso dalabyadan cajiibka ah
The eBay Superweekend waa dalab gaar ah oo muuqda marka lagu daro dalabyadiisa oo gaaraya illaa 60% qiimo dhimis, kuwani waa dalabyada ugu fiican.
"Xuquuqda Dayactirka", biil loogu talagalay xuquuqda dayactirka qalabka elektarooniga ah
Xaaladdan oo kale waa sharci ama biil ku sii fidaya waddanka Mareykanka oo dhan, ...
Jon Favreau inuu qoro oo uu soo saaro taxanaha Star Wars
Jon Favreu ayaa qori doona soona saari doona taxanaha 'Star Wars'. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan saxiixa ay Disney u sameysay taxanahii ugu horreeyay iyadoo lagu saleynayo taxanaha filimka caanka ah.
Porsche Mission E Cross Turismo, SUV koronto oo ah nooca Jarmalka
Porsche waxay kusii socotaa sharadka soo bandhigida gawaarida korontada si buuxda u shaqeysa. Iyo kan soo socda ee soo baxa wuxuu ahaa Porsche Mission E Cross Turismo
Facebook Messenger Lite wuxuu soo bandhigayaa wicitaano fiidiyoow ah
Wicitaanada fiidiyowgu waxay yimaadaan Facebook Messenger Lite. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan astaamaha barnaamijka miisaanka fudud ee lagu sheekeysto uu ku daro, taas oo aan u muuqan mid macno badan samaynaysa.
Kuwani waa sheekooyinka ugu muhiimsan ee ka iman doona gacanta Android P
Ragga ka socda Google ayaa ugu dambayntii shaaca ka qaaday waxa uu noqon doono nooca xiga ee nidaamka hawlgalka ee aaladaha moobaylka ee ay maamusho Android, laguna magacaabo Android P
Noocyada beta-kii ugu horreeyay ee Android P hadda waa la heli karaa
Waxaan arki doonnaa waa maxay wararka ku jira Horudhaca Soo Saaraha Android P, si aan fikrad uga helno wax badan ama ka yar oo ku saabsan mustaqbalka Android.
Waxaad hadda booqan kartaa jardiinooyinka Disney ee ka muuqda Google Street View
Kaamirooyinka 360º waxay shaqo fiican ka hayaan wadooyinka, magaalooyinka, jidadka iyo geesaha kale ee meeraheenna….
Apple waxay dooneysaa inay soo afjarto qaabka iTunes LP sanadka 2019
Apple ayaa ka saari doonta iTunes LP kahor dhamaadka sanadkan. Raadi wax badan oo ku saabsan qorshayaasha shirkadda Mareykanka ee ah inay joojiso qaabkan hadda.
Amazon iyo Google dagaalka way sii wadaan: Alaabada buulku way ka baabi'i doonaan Amazon
Warka kale ee xun ee google: alaabtiisa qalabaynta guryaha ee Nest dib dambe looguma iibin doono shirkadda ganacsiga weyn ee Amazon
Apple waxay sharad ku geli kartaa sii deynta MacBook Air ka jaban
Falanqeeyaha halyeeyga ah ee KGI, Ming-Chi Kuo waa iska cadahay in bilowga 2018 uu noqon doono sanadkii MacBookga, Applena waxay ku cusbooneysiin doontaa qaab jaban.
825 shaqaalaha Amazon Spain ayaa shaqo joojin ugu yeeray heshiiska cusub
825 shaqaalaha Amazon Spain ayaa shaqo joojin ugu yeeray heshiiska cusub. Wax badan ka ogow shaqo joojinta ay u yeereen iyo sababaha keenay.
Nokia si ay u iibsato Unium si loo hagaajiyo waxqabadka iyo caymiska guriga ee Wi-Fi
Nokia waxay ku sii socotaa qorshayaasheeda waxayna shaacisay iibsiga suurtagalka ah ee Unium, tani waa shirkad softiweer ku takhasustay ...
Sony waxay guriga ka saareysaa daaqadda iyadoo ay la socdaan cayaaraha bilaashka ah ee Maarso PlayStation Plus
Sony waxay ku dhawaaqday daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaaraha fiidiyowga ee bilaashka noqon doona bisha Maarso oo ay kujirto rukunka PS Plus, waxayna kaaga tagi doontaa afkaaga oo furan, Bloodborne GOTY iyo Ratchet & Clanck.
LG G7 waxaa lagu soo bandhigay MWC, laakiin si qarsoodi ah
Macluumaadka qaar ayaa soo baxay oo ku saabsan nooc ka mid ah soo bandhigid dhowr nasiib ah halkaas oo LG ay ku soo bandhigtay noocyada waxa ay noqon doonaan taleefannadooda soo socda.
The "notch" ee ku jira MWC ama dagaalka si loo nuqulo ilaa ciladaha
Dagaalkan nuqul ka mid ah Apple ma jiro xabad joojin, waxaa jiray boosteejooyin yar oo la soo bandhigay intii lagu jiray Shirweynihii Adduunka ee Mobilka iyadoo la adeegsanayo "qaanuun"
Shabakadaha Cambium '' Internetka Xad dhaafka ah '' ayaa bixin doona isku xirnaanta Wi-Fi meel kasta oo adduunka ah
Markii aan tagno buuraha ama xitaa waddooyinka ka gudba buurta, isku xirnaanta ama caymiska ...
Dagaalka ka dhanka ah lacag bixinta ee ciyaaraha fiidiyowga, wuxuu saameyn ku yeelan doonaa calaamadda da'da
Mareykanka gudahiisa way iska cadahay in qodobkaan ay tahay inuu bilaabo in la xakameeyo, hada waxay calaamadeyn doonaan cayaarahaan fiidiyowga ah waxayna saameyn ku yeelan doontaa da'da ugu yar ee lagu taliyey.
Vero waxay umuuqataa inay tahay shabakad bulsheed moodada ah waxayna dooneysaa inay afgembiso barta Instagram
Haatan waxaa yimid Vero, oo ah shabakad bulsheed oo aragti ahaan loogu talagalay inay kugu xirto kaliya kuwa runta daryeela.
Movistar Home iyo Vodafone V-Home, waxaan isbarbardhigeynaa adeegyada cusub ee guriga ku xiran
Labada shirkadood ee ugu xoogga badan suuqa qaranka, waxay go'aansadeen inay ku sharfaan hal-abuurka guryahooda ee ay ku soo jiidan karaan macaamiil badan, Movistar Home iyo Vodafone V-Home.
ZTE wuxuu bartilmaameedsanayaa 18: 9 oo leh ZTE Blade V9
ZTE Blade V9, oo ah nooc cusub oo wata agab qiimo sare leh iyo aqoonsi waji leh oo calanka laga helo.
Galaxy S9 hadda waa rasmi: qiimaha iyo astaamaha
Bilooyin badan ka dib, warar xan iyo kuwo kale, Kuuriyada Samsung waxay ugu dambeyntii si rasmi ah u soo bandhigeen astaanta cusub ee shirkadda oo aan ku tusayno dhammaan qeexitaannada, astaamaha iyo qiimaha
Dukaankii saddexaad ee Xiaomi ee Spain ayaa laga furay magaalada Barcelona
Xiaomi ayaa maanta ka furatay dukaankeedii ugu horeeyay Magaalada iyadoo ku furaysa waxyaabo lala yaabo sida telefishannada cusub ee dhowaan suuqyadeenna si rasmi ah ugu iman doona
Amazon inay furayso lix dukaan oo ATM ka yar
Guusha bilowga ah ee ay leedahay dukaanka ugu horreeya ee aan lacagta lahayn ee Amazon, Amazon GO, shirkadda ayaa la dhiirrigeliyey oo waxay ka furan doontaa Mareykanka lix dukaan oo cusub.
Sidan ayaad u dedejineysaa gaari xamuul ah 'Tesla', oo wuxuu kaa tagi doonaa gebi ahaanba cajaa'ib
Waxaan ka hadlaynay gaariga xamuulka qaada ee loo yaqaan 'Tesla truck' bilo, kamarad ayaa ku qabatay iyada oo la marayo waddooyinka Mareykanka oo xawaare buuxa ku socda.
Shaandheeyay qeexitaanka iyo faahfaahinta dhabta ah ee Galaxy S9, kuwani waa astaamaheeda
Dhamaanteen waan haysanaa, kuwani waa astaamaha saxda ah, qeexitaanada iyo sawirada dhabta ah ee Galaxy S9 ee aan ku aragnay daadadkii ugu dambeeyay.
Maxaa ku dhici doona gaariga uu Tesla hawada sare u diray? Marka waad raaci kartaa wadiiqadooda tooska ah
Bilaabida Falcon culus, gantaalkii SpaceX ee watay Tesla Roadster gudaha, wuxuu naga dhigay jahwareer ...
Sony waxay diyaarineysaa "cayaaraha bilaashka ah ee abid ugu wanaagsan" bisha Maarso ee PlayStation Plus
PlayStation wuxuu diyaariyaa bilaabida cayaaraha bilaashka ah ee taariikhda bishaan Maarso PS Plus.
Tani waa sida Galaxy S9 u muuqato mid daadanaya sababtoo ah xaqiiqda la kordhiyay
Xaqiiqda sii kordhaysa waa sharadka weyn ee shirkadda Cupertino, Apple. Si kastaba ha noqotee, Samsung waxay umuuqataa inay rabto inay maraan ...
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wax ku saabsan Nintendo's Mario waxaa laga heli karaa encyclopedia
Haddii aan ka hadalno Mario, haddii aad tahay 40 ama 5 jir, hubaal waad ogtahay cidda aan ka hadlayno. Mario wuxuu wataa ...
Algorithm-ka cusub ee Google wuxuu saadaalin doonaa halista wadnaha adoo fiirinaya indhaha
Algorithm-ka cusub ee Google wuxuu saadaalin doonaa halista wadnaha adoo fiirinaya indhaha. Raadi wax badan oo ku saabsan shirkadan algorithm ee loo isticmaali doono warshadaha daryeelka caafimaadka mustaqbalka.
Waymo waxay heshaa rukhsad ay ku bixiso safarrada gawaarideeda iskeed u shaqeysa
Waymo waxay heshaa rukhsad ay ku siiso gawaaridooda iswada. Ogow wax badan oo ku saabsan rukhsadda ay shirkaddu heshay taas oo u oggolaanaysa iyada inay la tartanto Uber ee Arizona.
Dyson: Shirkadda Vacuum si ay u bilawdo saddex baabuur oo koronto qaali ah
Shirkadda nadiifinta Vacuum ee Dyson ayaa soo bandhigi doonta saddex baabuur oo koronto qaali ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha shirkadda ay ku keeneyso gawaaridan suuqa.
Intel wuxuu wajahayaa 32 dacwadood oo ku saabsan Specter iyo Meltdown
Intel wuxuu wajahayaa 32 dacwadood oo ku saabsan Specter iyo Meltdown. Ogow wax badan oo ku saabsan dhibaatooyinka shirkadda soo food saaray maamul xumadeeda xaaladan awgeed.
Khasaaraha ugu badan ee ugu dambeeyay ee shirkadda HTC waa madaxweynaheeda, Chialin Chang
Kuwani maahan waqtiyo wanaagsan shirkadda Taiwan oo u muuqata inay ku dhex milmayso god hoose. Ilaa sanado qaar…
Macdanta 'Cryptocurrency miner' ayaa caqabad ku ah raadinta nolosha ka baxsan dunida
Sare u kaca aan la joojin karin ee ay cryptocurrencies ku hayaan adduunka oo dhan, taasna waxay sababtay koror aan dheellitirnayn oo qiimahooda, ayaa ka horjoogsanaya SETI inay sii waddo inay raadiso indho indheyn caqli-gal ah
Google ayaa ka saareysa badhanka "muuqaalka muuqaalka" Sawirada Google
Google waxay heshiis la gaadhay wakaaladda Getty Images: waxay kala noqon doontaa mid ka mid ah howlaha Google Images waxayna ka dhigi doontaa farriinta Xuquuqda daabacaadda mid ballaaran
Samsung waxay daabacdaa fiidiyowyadii ugu horreeyay ee Galaxy S9 oo muujinaya waxa noo oggolaan doona inaan sameyno
Samsung ayaa soo dhigtay sedex fiidyow barta ay ku leedahay YouTube-ka oo ay ku eegeyso qaar ka mid ah astaamaha aan ka heli karno Galaxy s9 iyo S9 + cusub
18% dhalinyarada Isbaanishka waxay qabatimaan internetka
18% dhalinyarada Isbaanishka waxay qabatimaan internetka. Ka hel macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xogta Wasaaradda Caafimaadka ee ku saabsan isticmaalka cudurada ee internetka.
Kani waa HomePod gudaha ah, gebi ahaanba aan macquul aheyn in la dayactiro
HomePod-ka Apple ayaa la jarjaray iFixit iyo kakanaanta soo saaristeeda ayaa ka dhigaysa dhibcaha dib-u-hagaajinta ugu yar.
VLC 3.0 hadda waxaa lagu heli karaa taageerada Chromecast, 8k, HDR iyo waxyaabo kaloo badan
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee VLC waxay gaareysaa nooca 3.0 oo leh tiro badan oo astaamo cusub oo loogu talagalay dhammaan aaladaha ay dalabku ku habboon yahay, taas oo ah, dhammaantood.
Heshiisyadii ugu fiicnaa ee Amazon ee maanta (12-02-2018)
Hoos waxaan ku tuseynaa dalabyada ugu xiisaha badan ee aan maanta oo dhan ka heli karno Amazon, dalabyo aan ka heli karno taleefannada casriga ah, kuwa ku hadla, kaarka xusuusta, ulaha USB ...
YouTube wuxuu ku dhawaaqayaa talaabooyin cusub oo ka dhan ah youtubers sida Logan Paul
YouTube wuxuu tallaabo ka qaadaa dadka sida Logan Paul. Shabakadu waxay ka dheregsan tahay dadka sida youtuber caan ah, sidaa darteed waxay qaadaan tallaabooyin cusub.
Pornhub wuxuu mamnuucayaa dhammaan qoto dheer ee jilayaasha caanka ah ee lagu abuuray Sirdoonka Artificial
Barxadda fiidiyowga ee loo yaqaan 'Pornhub video platform' ayaa hadda billaabatay kala sifeynta dhammaan fiidiyowyada nooca qoto-dheer, fiidiyowyada adeegsanaya sirdoonka macmalka ah si loogu beddelo wejiyada halyeeyada dad caan ah.
Ruushka wuxuu xirey dhowr injineer iyagoo adeegsanaya kombuyuutar kumbuyuutar si ay u qotomiyaan bitcoin
Injineero Ruush ah ayaa loo xiray iyagoo adeegsanaya kombuyuutar kumbuyuutar si ay u qariyaan Bitcoin. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan warkan xiisaha leh ee ka imanaya Ruushka.
Ku soo dejiso barnaamijka Gadget News ee loogu talagalay Android oo la soco [SWEEPSTAKES]
Waxaan kufashanayna kuhadalkan sameecadda weyn ee Bang ka ah SPC kumanaanka kun ee isticmaaleyaasha ah ee soo dajiya codsigeena
Faransiiska ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah dadka wata gawaarida casriga ah
Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay Gaalka ayaa diyaarinaya sharci cusub oo ka mamnuucaya dadka heysta mobilada dashboardka.
Kuwani waa xayeysiisyada ugu fiican 2018 Super Bowl
Xayeysiinta Super Bowl ayaa had iyo jeer ka mid ahayd meelaha soo jiidashada leh ee dhacdadan. Qodobkaan waxaan ku tusinaynaa kan ugu fiicnaa.
Elon Musk wuxuu badali doonaa magaca holaca dabka sababo la xiriira dhibaatooyin ka imaan kara caadooyinka
Elon Musk wuxuu ku badalaa magaca ololiyaha dabka caadooyinka. Waxbadan ka ogow dhibaatooyinka uu kala kulmay kastamada.
Apple waxay dayactireysaa iPhone 7 bilaash ah oo muujinaya fariinta "adeeg maleh" markay jirto shabakad
Apple waxay ku dayactireysaa iPhone 7 farriinta "adeeg ma leh". Ogow wax badan oo ku saabsan dhibaatada saameysa taleefannada Apple iyo in shirkadda ay dayactireyso.
PlayStation 4 waxay iibinaysaa PS3
Iibinta PlayStation 4 ayaa dhawaan dhaafi doonta kuwa PS3. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan iibinta qalabka loo yaqaan 'Sony console' kaas oo horey uga dhaafay jiilkiisii ​​hore.
Ebay waxay joojineysaa isticmaalka PayPal habka ugu muhiimsan ee lacag bixinta
Ebay uma isticmaali doonto PayPal inay tahay habka lacag bixinta aasaasiga ah. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka shirkadda ee ah inay joojiso adeegsiga barnaamijka bixinta.
Shil ka dhacay hordhaca iyo soo bandhigida gawaarida iswada ee Phantom AI [Muuqaal]
Waana in tijaabooyinka lagu qaado shilalka gawaarida iswada ay dhici karaan kiiskan ...
Sannadkan 2017 wuxuu ahaa sanad wanaagsan oo ku saabsan bixinta Xiriir la'aanta Spain: 45% isticmaalayaasha
Isticmaalka Contactless ee Isbaanishka wuxuu gaarayaa tirooyin wanaagsan. Sannadkii la soo dhaafay ee 2017 kororka isticmaalayaasha ayaa ku dhowaad 50%
Google ayaa hadda si rasmi ah u shaacisay in, sugitaan dheer ka dib oggolaanshaha lagama maarmaanka ah, ay ugu dambayntii iibsadeen qayb ka mid ah qaybta moobiilka ee shirkadda HTC $ 1.100 bilyan.
Singer 50 Cent wuxuu noqday milyaneer ka dib markii uu aqbalay Bitcoins albumkii uu soo saaray 2014
Fannaanka 50 Cent wuxuu ku caddeeyay bartiisa Instagram-ka, taas oo ay ugu wacan tahay iibinta albumka uu soo saaray 2014-kii oo uu u oggolaaday adeegsiga Seeraar ahaan qaab lacag bixin ah, wuxuu hadda haystaa in ka badan 7 milyan oo doolar
Telefónica waxay iskudarsareysaa waxyaabaha Netflix kujira Movistar +
Dagaalku wuu dhammaanayaa: Netflix wuxuu isku dari doonaa waxyaabaha ku jira Movistar +. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka labada shirkadood ee ah iskaashiga iyo is-dhexgalka waxyaabaha.
Amazon waxay ka dhigtaa hubinta wax la soo dhaafay Amazon Go
Nala joog maadaama aan fiirineyno sida farsamadan cusub ay u shaqeyso ee Amazon ay rabto inaan uga gudubno diiwaanka markaan wax iibsaneyno.
Intel wuxuu mar horeba ka shaqeynayay processor-yada ka difaaca Specter iyo Meltdown
Intel wuxuu mar horeba ka shaqeynayay processor-yada ka difaaca Specter iyo Meltdown. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha ay shirkaddu ku dhiseyso processor-yo cusub
Bakhaarka OnePlus ee khadka tooska ah waa la jabsaday, waxaa jira hadal ku saabsan 40.000 oo isticmaaleyaal ay saamaysay
Wax walba maahan sariir soo duug ah oo ku taal OnePlus waana in sumadda lafteeda si rasmi ah u xaqiijiso inay dhib soo gaareen ...
Waxaan ku bixinaa qarash badan sii deynta muusikada intii aan ku bixin jirnay CD-yada
Sida ku xusan falanqeyntii ugu dambeysay, waxaan ku maalgelinaynaa lacag ka badan muusikada dhijitaalka ah intii aan ku maalgashan jirnay qaabab sida CD-yada ama vinyl-ka
PcComponentes, ganacsiga elektaroonigga ah ee ugu wanaagsan ee lagu qiimeeyo shabakadaha bulshada ee 2017
Xaqiiqdii haddii aad ku nooshahay Spain waxaad taqaanaa dukaanka internetka ee PcComponentes. Hagaag, dukaankan alaabada ee laxiriira tikniyoolajiyadda, ...
Taariikhda: Waaxda cusub ee xarfaha loo qoondeeyay amniga internetka
Taariikhda: Shirkadda alifbeetada ee shirkadda amniga internetka. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan shirkadda cusub ee shirkadda ee u heellan kor u qaadista amniga ganacsiga.
Sababtaas awgeed waa inaadan waligaa ku calalin batariga taleefanka.
Waxaan kuu keenaynaa muuqaal sharraxaad ah oo si cad u caddayn doona sababta aadan waligaa u qaniinin batteriga taleefanka.
Nespresso mise Dolce Gusto? Waa maxay farqiga u dhexeeya iyo midka aniga igu habboon aniga
Mashiinnada qaxwada ee Nespresso iyo mashiinnada qaxwada ee Dolce Gusto, oo labadaba ah nidaamyo lagu diyaariyo kafeega iyadoo la adeegsanayo kaabsullada laakiin in kastoo qaarkood aysan ogaan karin, waxay ku kala duwan yihiin waxyaabo badan, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa waxay yihiin.
Dukaankii ugu horreeyay ee aan lacagta laga qaadan karin ee Amazon ayaa hadda furan, Amazon Go
Dukaankii ugu horreeyay ee aan lahayn ATM-yada shirkadda Amazon ayaa maanta oo Isniin ah ka furaya isla waddada halka ...
Samsung waxay rukhsad siisay taleefan casri ah oo leh 100% shaashad
Samsung waxay xareysaa patent-ka taleefanka shaashadda 100%. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee shirkadda Kuuriya ay sharciyeysay.
Google ayaa hagaajiya dhibaatada, waan cusbooneysiin karnaa Chromecast-keena
Google waa inay shaqeysaa si ay u xalliso dhibaatadan yar, shirkaddu waxay ku guuleysatay inay baarto cayayaanka, markaa haddii aad hadda cusboonaysiiso Chromecast.
OnePlus wuxuu xaqiijinayaa xatooyada xogta bogeeda
Ilaa 40.000 oo isticmaaleyaal ah oo ay saameysay xatooyada xogta OnePlus. Ka ogow wax badan oo ku saabsan shirkadda xaqiijinta jabsashada ay kala kulmeen degelladooda.
Lacag sameynta fiidiyowyada YouTube-ka ayaa waxoogaa ka sii dhib badan
YouTube-ka ayaa adkeynaya xeerarka lacag-abuurka. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan tallaabooyinka cusub ee uu webka ku qaaday munaasabaddan.
Google Chromecast waxaa laga yaabaa inuu burburayo shabakadaada WiFi
Cilad ayaa laga helay aaladaha Google Chromecast ee ay ku burburin karaan shabakaddaada WiFi, adiga oo kaa tagaya adiga oo aan lahayn xiriir internet
Hawada MacBookga ayaa toban jirsata oo hadda socota
Waxaan dib u eegis yar ku samayn doonnaa taariikhda MacBookga Air, laptop oo noqday tixraac suuqa oo dhan muddo dheer
Tani waa muusigga uu Obama ku talinayo 2017
Waxaan soo bandhigeynaa liiska Spotify ee Barak Obama uu ku talinayo 2017, Xaqiiqdu waxay tahay in aysan ahayn markii ugu horreysay ee Barak Obama uu qaato xorriyadan oo kale oo aan wax badan lagu arkin dadka ku nool adduunka oo dhan.
Xalka Intel ee 'Meltdown' iyo 'Specter Solution' ayaa keenaya reboots kombiyuutarada qaar
Ma dhihi kartid jawaabta Intel ee dhibaatada Meltdown iyo Specter waxay ahayd mid gaabis ah, laakiin taasi waa ...
Netflix ma iman doonto Nintendo Switch xilligan
Beddelka Nintendo wali kuma raaxeysan doono Netflix hadda. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhibaatooyinka qunsulka caanka ah uu wajahayo iyo gorgortanka aan horay u socon.
Digniinta gantaalka ee ruxday Hawaii, sidee ku dhici kartaa?
Hawaii subaxnimadii hore, latalin qaadatay ku dhowaad afartan daqiiqo in la saxo oo ka dhigtay muwaadiniin badan inay u maleynayaan in dhab ahaantii lagu dili karo weerar gantaal.
GoPro waxay joojisaa iibinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxayna fasaxday in ka badan 250 shaqaale ah
GoPro wuxuu ka tagayaa soo saarista iyo iibinta drones si wanaagsan. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka ay shirkaddu uga baxday ganacsigan.
NASA waxay ku dhawaaqeysaa keyd fara badan oo baraf saafi ah in laga helay Mars
NASA ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in, kadib baaritaano iyo tijaabooyin isdaba joog ah, ay ku guuleysteen inay ogaadaan inay jiraan kayd fara badan oo baraf saafi ah oo ku yaal Mars.
Dhowr xanta ayaa soo jeedineysa in Huawei uusan ku soo bandhigi doonin P20-kiisa xarunta MWC
Shaki la'aan, jiritaanka war xun ayaa u ahaan doona qaar badan oo adeegsadayaasha ah oo sugaya beddelaad ku dayashada astaanta kale ah ...
Intel wuxuu dhejin doonaa ku dhowaad dhammaan processor-keeda si loo joojiyo Specter iyo Meltdown
Intel wuxuu dhejin doonaa dhammaan processor-yada wax ka yar 5 sano jir dhamaadka bisha si loo dhammeeyo Meltdown iyo Specter hal mar oo keliya.
Apple waxay sameysay tallaabo la yaab leh oo u oggolaatay inay rakibto noocyo hore oo iOS ah
Apple waxay sameyneysaa dhaqdhaqaaqyo isdaba joog ah oo aan caadi ka aheyn shirkadda taasna waa ...
Kodak wuxuu yeelan doonaa cryptocurrency u gaar ah
Kodak waxay bilaabeysaa keydkeeda gaarka ah ee KODAKCoin. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soosaarida lacagta cusub ee dijitaalka ah ee shirkaddu.
Fisker E-motion, oo ah tartan dheer Tesla
Isaga oo ka faa'iideysanaya horusocodka dhererka iyo baahinta sida CES 2018, Fisker wuxuu rabay inuu ka yaabsado dadka maxalliga ah iyo shisheeyaha isagoo si rasmi ah u soo bandhigaya noocii ugu horreeyay ama nooc ka mid ah cajiibka Fisker E-motion.
Kasetka ayaa cirka isku shareeray sanadkii 2017
Sannadkii hore ee 2017, iibinta cajaladda ayaa si aad ah kor ugu kacay. Tani waxay ku mahadsan tahay laba heesood oo wax soo saar oo ku sharxaya retro
Kaarka deynta ee ugu horreeya ee aan la xiriirin oo leh akhristaha faraha ayaa hadda run ah
Kaarka deynta ee ugu horreeya ee aan la xiriirin oo leh akhristaha faraha ayaa hadda run ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan kaarka deynta Gemalto
Shiinaha ayaa doonaya inuu ku laabto Dayaxa sannadkan, markan oo la raacayo shixnad dhir iyo cayayaan ah
Shiinuhu wuxuu rabaa inuu ku laabto Dayaxa sanadkan 2018, oo ah sanad hawlo badan oo dayax gacmeedku ay qorsheeyeen wakaaladaha kaladuwan ee hawada sare iyo in Shiinuhu uu sii dheeraan doono isagoo diraya dhir iyo cayayaan.
Samsung waxay soo bandhigeysaa xogta Exynos 9810, oo ah processor-ka Galaxy S9
Exynos 9810 hadda waa rasmi: processor-ka Samsung Galaxy S9. La soco waxbadan oo ku saabsan processor-ka cusub ee Samsung ee dhowaan suuqa soo galaya.
Instagram ayaa dhaawici karta caafimaadka maskaxda ee dhalinyarada
Maxaa dhacaya haddii aan ogaanno in Instagram ay si xun u saameynayso caafimaadka maskaxda ee dhallinteenna? Taasi waa waxa ay daraasadihii ugu dambeeyay tilmaameen.
Waxaa lagu arkay cilad amni oo halis ah Intel CPU-yada
Waxaa hadda la shaaciyay in processor-yada Intel ee la soo saaray 10 sano ka hor ilaa waqtigan xaadirka ah ay ka maqan yihiin u nuglaansho daran oo sababa inay lumiyaan waxqabad badan.
Is-maamulka gawaarida korontada ku korodhay in ka badan 50 boqolkiiba muddo 6 sano ah
Sida cinwaanka warkan uu sheegayo, is-maamulidda baabuurta korontada ku korodhay in ka badan boqolkiiba 50 ...
Ruushka ayaa lumiyay dayax gacmeed gaaraya 45 milyan oo euro sababo la xiriira "xisaab xumo"
Sida ay yiraahdaan, waxyaabahan waxay ka dhacaan xitaa qoysaska ugu fiican. Waan hubaa inuu qof qaatay ...
Kuwani waa ciyaaraha bilaashka ah ee Janaayo 2018 ee PlayStation Plus
Waxaan ogaan doonnaa waxa ay yihiin ciyaaraha bilaashka ah ee PlayStation Plus bisha Janaayo 2018, laakiin waa inaan kuu sheegaa in Deux Ex uu ka sarreeyo wax walba.
WhatsApp ayaa joojin doonta ka shaqeynta laba madal dhamaadka sanadka
Sababta layaabka leh ayaa ah in bisha Diseembar 31, WhatsApp ay joojin doonto ka shaqeynta laba madal oo moobiil ah, taasoo yareyneysa iswaafaqadooda
Hackers sidoo kale way fiicnaan karaan, sida laga soo xigtay RAE
Akadeemiyadda Boqortooyada ee Luqadda, ayaa hadda u aqoonsatay macnaha labaad ee jabsadayaasha, hadda sidoo kale waa ragga wanaagsan ee filimka
Ku soo oogista taleefankeena casriga ah USB-ga dadweynaha waa fikrad aad u xun
Batariga taleefanka gacanta ayaa sii ahaanaya, haatanna wuu sii socon doonaa, dhibaato nagu qasbi doonta ...
Mercedes iyo kooxda Linkin Park waxay iska kaashadeen sidii loo abuuri lahaa codka ugu fiican ee baabuurta korontada ku shaqeeya
Mercedes waxay la shaqeyn doontaa kooxda weyn ee Linkin Park, si loo abuuro dhawaaqa saxda ah ee gawaarida korantada ee shirkadda Bavaria.
Eric Schmidt wuxuu iska casilay xilkii agaasimaha guud ee Alphabet (Google)
Eric Schmidt, oo ah agaasimaha guud ee Google ee adeegsaday iphone, waa ninka dimuqraadiyey adeegyada internetka ee adduunka oo dhan, hadda wuxuu ka tagayaa booskiisa Alphabet.
Apple Park bishii Diseembar 2017: fiidiyow cusub oo loo yaqaan 'drone-view'
Matthew Roberts ayaa markale nagula yaabay socdaal diyaaradeed oo lagu hago Apple Park iyo sida ay tahay bisha Diseembar 2017
Ku ururi mushaharka bitcoin Japan gudaheeda waa macquul
Waxa aanan ka fikirin ayaa ah in hadda ay tahay habka lacag bixinta, laakiin aan ku heli karno mushaharkeena bitcoin.
UPS waxay ka dalbaneysaa Tesla 125 gawaarida korontada
Warka wanaagsan ee labada shirkadood tan iyo markii Tesla uu ku leeyahay tan amarka koowaad ee ugu weyn ee raxan ...
Duulaankii Porg, astaamihii dabeecadda Star Wars horeba waxay u lahayd minigame
Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku dhexjirno BB-8 dagaal gaar ah oo lagu xukumo Porg-ka dhexdiisa Millennium Falcon.
Shirkadaha Panasonic iyo Toyota ayaa si wada jir ah uga shaqeyn doona soo saarista baytariyada baabuurta korontada ku shaqeysa
Shirkadaha Japan, Panasonic iyo Toyota waxay gaareen heshiis lagu xoojinayo soo saarista iyo qaabeynta baytariyada baabuurta korontada ku shaqeysa.
Apple waxay la wadaagi doontaa saamileyda Steve Jobs Theater, Apple Park
Oo waa in la soo saaray moodooyinka cusub ee iPhone 8, 8 Plus iyo iPhone X waxay ahaayeen sidaas ...
Ma ubaahantahay batariga nalkaaga Nintendo? ZeroLemon ayaa kuu keenaya
Kiiska Lacag-bixinta Batroolka ee ZeroLemon, oo ah nidaam na siinaya illaa toban saacadood oo dheeri ah oo madax-bannaanideena Nintendo Switch.
BlackBerry KeyONE wuxuu si rasmi ah u yimid dalka Spain
Maanta BlackBerry KeyONE wuxuu yimid suuqa Isbaanishka, markii qofna u baahnayn, cidna ma weydiisanin cidna ma fileynin.
Dhamaanteen waxaan isticmaaleynaa GIFs aad iyo aad u badan, kuwani waa kuwa ugu caansan sanadka sida laga soo xigtay Giphy
Shaki kuma jiro in Gifsku ay sii kordhayaan adeegsadayaashu isla markaana ay si weyn u adeegsadaan ...
Raac hashtags, waalli kale oo guuleysta Instagram
Waxaad awoodi doontaa inaad la socoto waxyaabaha ugu habboon ee ku saabsan danahaaga si fudud adoo raacaya erey ama koox iyaga ka mid ah.
Jedi Dambe ee Ugu Dambeeya wuxuu u imaanayaa Star Wars Battlefront
Sidee bay noqon kartaa haddii kale, shirkadda sameysa ciyaarta fiidiyowga ayaa si adag ula shaqaysay Disney si ay u hesho dhammaan wararka.
Wicitaanka Waajibaadka: WW2 ayaa ugu sarreeya iibinta ciyaarta fiidiyowga bisha Nofembar
PlayStation 4 wuxuu sii wadaa inuu xukumo Spain illaa iyo hadda, halka Call of Duty: WW2 uu kasbaday tiro wanaagsan oo kuwa raacsan FIFA-na wali waa sii jirtaa.
Apple waxay wax ka badali kartaa baytariyada si ay uga sii darto wax qabadkooda
Xanta ugu dambeysa ee ku saabsan waxqabadka la hagaajiyay ee beddelka bateriga ayaa ku soo kordhay Reddit, sida muuqata Apple ayaa xoog u leh waxqabadka liita.
Kuwani waxay ahaayeen fiidiyowyada ugu caansan YouTube-ka ee 2017
Marka bal aan aragno kuwa ugu caansan fiidiyowyada YouTube intii lagu jiray 2017 labadaba Spain iyo adduunka intiisa kale.
Joogitaanka bakteeriyada qaarkood ee calooshaada waxay kugu sababi kartaa inaad miisaankaaga si dhakhso leh u dhisto
Daraasaddan cusub ee laga sameeyay Danmark waxay muujineysaa inay suurtagal tahay in la ogaado nooca cuntada aad qaadanaysid iyadoo ku xiran bakteeriyada jidhkaaga ku jirta.
Sidee loo ogaadaa inta saacadood ee aad dhageysatay muusigga Spotify intii lagu jiray 2017
Nala soo ogow inta saacadood ee aad dhageysaneysay muusikada Spotify intii lagu jiray sanadka 2017 oo leh dhowr tallaabo oo fudud.
Sanadka 2018 waxaad ku beddeli kartaa naanaystaada Shabakadda 'PlayStation Network'
Sony waxay ku dhawaaqeysaa inta lagu jiro sanadka soo socda ee 2018 aad awood u yeelan doonto inaad magacaaga ku beddesho Shabakadda PlayStation, waa waqtigii la bilaabi lahaa hal-abuurnimo.
Bixby horeyba waa Isbaanish, laakiin kaliya Mareykanka
Iyo in kaaliyaha Samsung u muuqdo inuu helayo baytariyada xagga luuqadaha, iyo ...
Ku raaxayso sugitaanka ilaa Santa Claus uu ka yimaado «Raac Santa»
Hal sano oo cusub, mahadsanid Google, waxaan kadhigi karnaa maalmaha kahor Kirismas-ka kuwo aad uxiiso iyo xiiso badan.
Kuwani waa emoji cusub oo loogu talagalay 2018 iyo qaar leh ikhtiyaar ikhtiyaari ah
Shaki nagagama jiro in emoji uu sii wadi doono hagaajinta noocyada mustaqbalka iyo cusbooneysiinta sidii ay u sameyn jireen ...
Windows waxay rabtaa AirDrop u gaar ah inta udhaxeysa iOS iyo PC
Ka waran haddii Microsoft ay sii deyso arji? Waxay ka shaqeynayaan taas Redmond, taasna waa in Windows ay lahaan karto AirDrop u gaar ah.
Imgur waxaa la jabsaday 2014 waxayna ogaadeen dhamaadka 2017
Imgur, bogga caanka ah ee caanka ah, ayaa sanado ka hor la kulmay weerar jabsade ah. Sannado ka dib way garataa oo u digtaa adeegsadayaasheeda
Amazon waxay raadineysaa qeybiyeyaal Isbaanish ah € 14 saacaddii, inta kale waad dhigtaa
Shaqo bixinta ugu dambeysay ee Amazon waa mid si gaar ah u gaar ah, waxay kugu siineysaa qiimo dhan € 14 saacaddii haddii aad u qeybiso xirmooyinkeeda ... khiyaano ama daaweyn?
Gawaarida korontada ee Tesla ayaa ka jaban doonta wadada cusub ee loo yaqaan 'Roadster'
Intii lagu guda jiray soo bandhigida Gawaarida 'Tesla Truck', xogta qiimaha lama soo bandhigin. Waxaan hadda xaqiijin karnaa qiimaha labada nooc ee iibka ku sii socon doona
Google wuu ogyahay meesha aad joogto, iyadoon loo eegin inaad leedahay meel firfircoon
Google waxay dhawaan xaqiijisay inaysan dan ka lahayn haddii aad goobta ka shaqeysid iyo in kale, way ogtahay meesha aad joogto marwalba.
Hawaii iyo Belgium waxay dagaal kula jiraan sanduuqyada abaalmarinta ee ciyaaraha fiidiyowga
Tani waa sida dariiqa sharcigu u bilaabmayo ee ku saabsan sida bililiqada noocan ah ee muranka badan dhalineysa loo bilaabi doono in la nidaamiyo.
Uber waxay qiraysaa inay la kulmeen jabsasho saameysay 57 milyan oo isticmaale
Uber ayaa hada si rasmi ah u xaqiijisay in akoonada 57 milyan oo isticmaaleyaal ah la jabsaday bishii Oktoobar ee la soo dhaafay ...
Disney Pixar waxay si rasmi ah u sii deysaa 'Incredibles 2' Teaser
Xagaagan qeybta labaad ee "The Incredibles" ayaa lagu sii deyn doonaa tiyaatarada, waa filimka The Incredibles 2….
TIME horeyba wuxuu uhelay tobanka qalab ee ugufiican sanadka 2017
Waxaan si qoto dheer u ogaan doonaa waxa ugu fiican ee aaladaha 2017 ay u ahaayeen majaladda TIME iyada oo aan laga wada hadlin.
Jiilka labaad ee Tesla Roadster, 0 ilaa 100 wax ka yar 2 ilbidhiqsi
Jiilka labaad ee Tesla Roadster hadda waa rasmi. Baabuurkan cusub ee isboortiga oo si buuxda koronto u shaqeeya wuxuu ka socdaa 0 illaa 2 wax ka yar XNUMX ilbidhiqsi
Tesla Semi, kani waa gawaarida korontada ee Elon Musk
Tesla Semi waa gaari xamuul koronto oo ugu horreeyay ee American Tesla ah. Waxaan kuu sharxeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato gaariga xiga ee mustaqbalka
Cristóbal, malaa'igtaada mas'uulka ka ah shaagagga. Kani waa nooca cusub ee SEAT
Dunida gawaarida ayaa si sii kordheysa ugu xiran tan tikniyoolajiyadda kiiskanna maareeyaha ...
Shaqada gurigu waa ganacsi qof walba leeyahay Samsung-na way xasuusataa #YaNoHayExcusas
Maalmahan xitaa waxay u muuqataa xoogaa "foolxumo" in laga hadlo in dadka loo qaybiyo shaqooyinka guriga waana ...
Kuwani waa dalabyada ugufiican «Tirintii» loogu talagalay Amazon Black Friday
Waxaan horeyba u joognay geeska laga bilaabo Black Friday, Amazon had iyo jeer waxay bilaabaan inay diiriyaan matoorada, taasi waa sababta ...
Faa'iidooyinka Jimcaha Madow ayaa marka hore yimaada Geekbuying
Waxaan ku siineynaa safar gaaban oo ah badeecooyinka ugu fiican ee aad ka heli karto maanta Geekbuying waxay ku bixiyaan qiimo aan lagaran karin.
Kooxda Alibaba waxay jebisaa diiwaanka iibka hal maalin oo ah 11/11
Sabtidii la soo dhaafay 11 ka mid ah 11ka caanka ah ee Singles Day ayaa looga dabaaldegaa Shiinaha, iyo shirkado badan oo waaweyn ...
Kuwani waa boosteejooyinka la jaan qaadi kara Harry Potter: Wizards Unite
Tani waa liiska taleefannada la jaan qaadi kara Harry Potter: Wizards Unite, Pokémon Go cusub oo ku saleysan deegaanka Harry Potter.
Xiaomi ma istaago oo waxay diyaarisaa furitaanka ilaa 10 dukaan oo ku yaal Spain
Waana goor dhaweyd oo aan xaqiijinay warka ku saabsan degitaanka rasmiga ah ee Xiaomi Spain iyo ...
Disney waxay ballanqaadaysaa in barnaamijkeedu ka jaban yahay Netflix
Maanta Maamulaheeda hadda wuxuu ogeysiiyay war muhiim ah oo keliya, barnaamijkeeda ku saabsan baahida loo qabo ayaa ka jaban Netflix.
Waxay umuuqataa in daloolka lakabka ozone uu bilaabmayo inuu xirmo
Saynisyahanno iyo cilmi baarayaal ka socda NASA iyo National Oceanic and Atmospheric Administration waxay ku dhawaaqayaan in daloolka lakabka ozone uu xirmayo.
Vespa Elettrica, tusaalaha Talyaaniga ee aan shidaalka ku jirin ayaa run noqday
Piaggio wuxuu aakhirka bilaabi doonaa nooc ka mid ah quraafaadka quraafaadka ah ee Vespa oo dhameystiran sanadka soo socda 2018. Magaciisuna waa «Vespa Elettrica» iskiisana waa mid xiise leh
Lamborghini Terzo Millennio, supercar koronto leh teknolojiyad mustaqbal leh
Lamborghini wuxuu dhiirrigelinayaa gaarigiisa fikradda soo socota. Kani waa gaariga korontada ku shaqeeya ee Lamborghini Terzo Millennio oo si buuxda koronto u shaqeeya
Kaaliyaha Google wuxuu hadda u aqoonsanayaa heesaha inay yihiin Shazam
Hadda Kaaliyaha Google wuxuu xaqiijiyay inay awood u yeelan doonto inay si dhakhso leh u aqoonsato heesaha kaliya iyaga oo dhageysta.
Ethereum Waa maxay iyo sida loo iibsado Ethers?
Wax walba oo ku saabsan Ethereum iyo Ethers, barxadda cusub iyo tartanka cryptocurrency ee Bitcoin. Raadi meesha iyo sida looga iibsado Ether kalsooni iyo dammaanad.
NichePhone-S taleefanka gacanta ee loo yaqaan 'Android size card'
NichePhone-S, taleefan Android ah oo layaab ku leh cabirkiisa yar, aan ku baranno xoogaa si dhow.
Waa rasmi, Xiaomi waxay ku timid Isbaanish alaabooyin iyo qiimayaal aad u xiiso badan
Ka dib warar xan ah oo badan kadib waxaa si rasmi ah loo shaaciyay, Xiaomi waxay timid Spain iyadoo leh laba dukaan oo jireed oo cusub iyo badeecooyin badan oo qiimo jaban.
Bitcoin, waa maxay, sidee u shaqeysaa iyo meesha laga iibsado Bitcoins
Wax walba oo ku saabsan Bitcoin. Waa maxay, taariikhda, sida loo iibsado Bitcoins, faa'iidooyinkiisa iyo daciifnimadiisa ee cryptocurrency ugu caansan.
Apple Aqoonsigiisa Wejiga Ma Ku Kala Duwan Yihiin Walaalaha Mataanaha ah? Malaha maya
Apple wuxuu noogu balan qaaday soo bandhigida in Aqoonsiga Face-ka uu yahay mid sax ah oo awood u leh inuu kala saaro xitaa walaalaha mataanaha ah, laakiin taasi waxay umuuqataa inaysan ahayn.
Furashadan, Ford wuxuu doonayaa inuu ka hortago gawaarida xamuulka inay ku seexdaan gaariga
Qeybta gaadiidka waddooyinka waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan waddan kasta, haddii kalese waxaan ...
IONITY, oo ah shabakad xeedho waaweyn leh oo doonaysa inay ku sii fidiso Yurub oo dhan
IONITY waxay rabtaa inay ku qalabeyso Yurub 400 xarumo xeedho oo waaweyn oo loogu talagalay baabuurta korontada ku shaqeeya. Wuxuu u tartamayaa sida ugu weyn ee Tesla
Opel waxay gawaarida ku iibisaa Amazon Spain
Opel wuxuu iibinayaa 20-ka cutub ee ugu horreeya SUV Grandland X iyada oo loo marayo Amazon Spain. Iibku waa dhakhso oo wuxuu u dhigmaa sii-qabsi
Kuwani waa hordhaca shirkadda Netflix bishii Nofeembar 2017
Waxaan kuu soo qaadaneynaa liistada saxda ah ee aad awood u yeelan doonto inaad ku ogaato waxa ay ka kooban tahay Netflix Spain ayaa noo keenta inta lagu jiro bisha Nofeembar 2017
Daimler E-Fuso Vision One, baabuurkii ugu horreeyay ee koronto si buuxda u shaqeeya ayaa halkan jooga
Fuso-E Vision One waa Daimler gaari xamuul koronto ugu horeeyay. Is-maamulkeeda waa 350 kiiloomitir wuxuuna qaadi karaa 11 tan
Microsoft Andromeda, shirkaddu waxay ku shaqeyn laheyd buug xusuus qor ah
Microsoft Andromeda waa mid ka mid ah mashaariicda ay shirkadda Redmond ka shaqeyneyso. Waxay noqon laheyd dib u soo kabashada buuga dijitaalka
Honda wuxuu soo bandhigayaa RoboCas, qaboojiye iskiis ah oo leh muuqaal saaxiibtinimo leh
Honda RoboCas waa fikrad si buuxda u koronto-yar oo iskiis u shaqeysa loona isticmaali karo xaaladaha kala duwan.
Google ayaa macaamiisha ugu dirtay cillad Pixel 2 unug
Cutubkan ka tirsan Google Pixel 2 ee aan ka hadalnay xitaa ma uusan dhaafin kantaroolka tayada gudaha ee shirkadda, welina waa la raray.
Opel ma siiso wax ku filan soo saarkeeda koronto, Ampera-e
Opel waa inay curyaamiso iibinta korontoteeda Ampera-e ee Norway sababo la xiriira baahida weyn ee aysan awoodin inay taageerto.
Kuwani waa taariikhaha dalabyada uumiga ee xaday
Taariikhaha iibka xaraashka ee soo socda ayaa la sii daayay inta harsan ee 2017, ma rabtaa inaad iyaga ogaato? Waxaan kuugu soo qaadaneynaa sidii had iyo jeer ku jirtay Actualidad Gadget.
Carruurta iyo saacadda smartwatch, isku dar ammaan ah?
Waxay umuuqataa in badqabka caruurtu uusan aad ugayareen marka laga hadlayo ku darida aaladaha casriga ah caruusadooda yar
Gigabyte Aorus X9, oo ah laptop dhab ah oo lagu ciyaaro
Waxaa jira adeegyo muhiim ah oo adeegsadayaasha ah oo doonaya laptop si uu ugu ciyaaro baahiyaha dhaqdhaqaaqa kala duwan, Gigabyte wuxuu siiyaa Aorus X9.
Facebook Messenger wuxuu kuu ogolaanayaa inaad lacag ku dirto PayPal
Hadda waxaad si sahal ah ula wadaagi kartaa lacagaha saaxiib Facebook ah adoo adeegsanaya arjiga Rasuulka ee loo heli karo isticmaale kasta.
Samsung waxay soo bandhigeysaa Bixby 2.0, jiilka labaad ee kaaliyaha u jihaysan aaladaha casriga ah
Shirkadda Kuuriya waxay samaysay boodbood iyada oo Bixby ay bilawday jiilkii labaad si ay u maareeyaan aaladaha casriga ah ee gurigeenna.
Razer Blade Stealth iyo Razer Core V2, uguna dambeeya ciyaarta
Shirkada ciyaaraha ee Razer ayaa ku dhawaaqday sharadkeeda cusub ee 2017, laptop-ka Razer Blade Stealth 2017 iyo banaanka hore ee Razer Core V2 GPU
La Caixa iyo ImaginBank ayaa hadda la jaan qaadaya Apple Pay
Macaamiisha La Caixa iyo ImaginBank waxay adeegsan karaan kaarkooda amaahda iyo debit-ka adeegga Apple Pay laga bilaabo maanta
Huawei Mate 10 iyo Mate 10 Pro ayaa yimid: Qiimaha iyo astaamaha
Huawei Mate 10 iyo Mate 10 Pro, ha moogaanin qodobkan aan kuugu sheegeyno qiimaha, qeexitaannada iyo goorta aad awoodi doontid inaad iibsato.
Microsoft Edge waxay ka dhigeysaa kulankeeda rasmiga ah Google Play
Microsoft Edge hadda waxaa loo heli karaa in laga soo dejiyo Google Play qaab rasmi ah, in kasta oo ay wali ku jirto qaab beta ah.
360º fiidiyowyo ah oo mobilada ku jira, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato
Waxaan rabnaa inaad wax yar ka sii si qoto dheer uga ogaato waxa 360º video ay ku saabsan yihiin iyo sida ugu badan ee aad uga heli karto moobaylkaaga.
Bitcoin way dhaaftay oo waxay ka sarreysaa $ 5000
Mar labaad, Bitcoin waxay na tusaysaa in caannimadiisa aysan joojinaynin koritaanka, kana badan tahay $ 5.000
OnePlus waxay xog gaar ah ka ururisaa isticmaaleyaasha iyadoon ogolaansho laga haysan
Saynisyahan kombiyuutar ah ayaa ogaadey in OnePlus uu aruurinayo oo gudbinayo xogta iyo macluumaadka gaarka ah ee adeegsadayaashooda iyo boosteejooyinkooda
Samsung waxay soo saartay robot vacuum nadiifiye la mid ah Darth Vader
Samsung waxay bartilmaameedsaneysaa ifafaalaha Star Wars, si aad u badan si ay u bilaabeen laba moodel nadiifiye robot ah oo matalaya jilayaasha Star Wars taxane
Telegram waa la cusbooneysiiyaa oo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto goobtaada waqtiga dhabta ah
Telegram waxaad hada la wadaagi kartaa asxaabtaada goobta saxda ah, mid kale oo ka mid ah howlaha cusub ee Telegram ka dhigaya WhatsApp.
Tani waa sida ay u shaqeyn doonto WhatsApp Business, oo horeyba uga bilaabatay tijaabooyinkeedii ugu horreeyay Spain
Ganacsiga WhatsApp horeyba waa xaqiiqo in lagu tijaabiyo gudaha Isbaanishka maantana waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta ku saabsan nooca codsigan.
IOS 2 beta 11.1 ayaa yimid iyadoo lagu rakibey emojis cusub
Beta 2 ee iOS 11.1 ayaa imaan doona iyadoo lagu rakibayo warar, ciladaha cilladaha iyo waliba emojis, oo aan qiyaaseyno inuu sidoo kale gaari doono nooca ugu dambeeya.
Amazon waxay rabtaa inaad iibsato daawooyinkaaga
Amazon waxay si dhab ah uga fiirsan doontaa inay soo gasho ganacsiga farmashiyaha si ay ugu awoodaan inay ku siiyaan daawooyinka laguu qoro khadka tooska ah
Sirta ugu qarsoon ee gudaha Xbox One X ayaa la muujiyay
Aynu aragno ukuntaan hoose ee shirkadda Microsoft ay ku qarisay Xbox One X waxay ka kooban tahay, waxay ka kooban tahay aqoon hore oo Microsoft ah.
Airbus si ay u tijaabiso tagsigeeda duulaya ee CityAirbus sanadka 2018
Airbus waxay damacsan tahay inay tijaabiso taksigeeda duulaya sanadka soo socda. Tijaabooyinkii ugu horreeyay ee CityAirbus si guul leh ayaa loo dhammaystiray
Kuwani waa hordhacyada Netflix, HBO iyo Movistar + Oktoobar
Bishan Oktoobar waxay la timid waxyaabo aad u xiiso badan oo ku saabsan Netflix iyo inta kale ee dhufto ee falanqaynta, sida Movistar + iyo HBO Spain.
Jabsashada Yahoo waxay saameysay dhammaan akoonnada isticmaaleyaashooda
Verizon waxay ku xaqiijineysaa bayaanka in Yahoo's 2013 jabsadku dhab ahaantii saameeyeen dhammaan 3.000 bilyan xisaabaadka isticmaalaha
Shan Sanduuqa TV-ga oo leh Android dhammaan miisaaniyadaha
Nala joog oo soo hel kuwa kuugu fiican ee kuugu habboon ee beddelka sanduuqa TV-ga ee Android, adiga oo la jaanqaadaya baahiyahaaga.
Khamrigan ma keeni doono madax xanuun ama ma keenayo raaxo la'aan inta uu cunayo
Baarayaasha Isbaanishka waxay maareeyaan inay soo saaraan khamri aan lahayn hormoonka histamine, sababta ugu weyn ee jirrada iyo madax xanuun marka la cuno
Metal Gear V iyo Amnesia Collection ayaa ku ciyaaraya PS Plus bisha Oktoobar
Qaar ka mid ah waxyaabaha fiidiyaha toddobaadlaha ah ee fiidiyowga ee fiidiyowga ah ayaa laga helaa bilaash gudaha barnaamijka PlayStation Plus.
AA-da lagu sameeyay Spain taas oo ka dhigaysa isgoysyada siman kuwo aamin ah Boqortooyada Ingiriiska
Sirdoonka Artifishalka sidoo kale wuxuu ka imaan karaa Spain, si aad u badan si ay ugu dambeyn karaan xakamaynta isgoysyada heerarka Boqortooyada Ingiriiska oo dhan
Kadib dhowr sano oo masaafurin ah, Apple TV wuxuu ku laabtay Amazon
Ka dib laba sano ka dib, Apple TV wuxuu bilaabaa inuu si aamusnaan leh uga muuqdo dukaanka Amazon, wax yar uun ka hor bilowga barnaamijka Prime Video
Instagram waxay rabtaa inaad ku xakameyso faallooyinka cusbooneysiintan
Astaamahan maareynta faallooyinka cusub waxaa si aad ah u dalbaday isticmaaleyaal badan, waana hubaal inay yimaadeen.
Waxaan falanqeyneynaa FIFA 18, wali waa Boqorka kubada cagta dhijitaalka ah
Maanta waxaan falanqeyn doonaa ciyaarta fiidiyowga ee ugu iibinta badan kubada cagta ee loogu talagalay in lagu sii wado xukunka sanadkan, FIFA 18.
IPhone 8 wuu ka adkaysi badan yahay sida muuqata jaleecada hore
In kasta oo waxa u muuqan kara jaleecada hore, taleefanka cusub ee iPhone 8, oo horeba suuqa looga helay, ayaa ka adkaysi badan intii aannu wada qabnay.
DxOMark wuxuu u duceeyaa kamaradda iPhone 8 iyo iPhone 8 Plus iyada oo tixgelinaysa sida ugu fiican xilligan
IPhone 8 mar hore ayaa laga heli karaa suuqa oo sida ay DxOMark sheegtay kamaradeeda ayaa ah tan ugu fiican suuqa, iyadoo la sugayo hordhaca iPhone X.
NASA iyo Ruushku waxay ka wada shaqeyn doonaan horumarinta Saldhigga Hawada Sare ee Dayaxa
Roscosmos, Wakaaladda Hawada ee Ruushka, ayaa hadda ku dhawaaqday inay ku biiri doonto xoogaga NASA horumarinta Saldhigga Hawada ee Dayaxa.
Ma ogtahay in ... "Si wanaagsan wax loo qoro waa qurux badan tahay"?
Wiko iyo La Vecina Rubia waxay ku biireen xoogaga si ay u bilaabaan Qorista si fiican waa qurux badan, waa codsi si looga dhigo dadka isticmaala inay ka warqabaan isticmaalka saxda ah ee higaada
IOS 11 iyo watchOS 4 waxay si rasmi ah u yimaadaan alaabada Apple
Xilliga runta ayaa yimid, nooca rasmiga ah ee iOS 11 wuxuu ku jiraa server-yada waadna soo dejisan kartaa, oo ay weheliso watchOS 4 wixii hadda ka dambeeya.
Fortnite wuxuu kiciyaa iskutallaabta ciyaarta udhaxeysa PlayStation 4 iyo Xbox One markii ugu horeysay
Fortnite waa ciyaartii ugu horreysay ee oggolaatay nidaamkan aadka loo dalbaday, waxayna umuuqataa in ay adag tahay in qofna uu ogaaday, illaa iyo hadda.
Tani waa qiimaha Porsche Mission E, baabuurkeeda isboortiga korontada ku shaqeeya
Marka lagu daro Tesla, waxaa jira kuwo horeyba ugu sharaddeeyay matoorrada korantada moodooyinkooda mustaqbalka. Waqtigaan la joogo waxaa horey u jiray gawaari is haysta oo ...
Xitaa howlwadeenada Uber ayaa loo shaqaaleeyay sidii iyagoo madax banaan
Maxkamad ku taal magaalada Barcelona waxay ku cambaareyneysaa Uber inay aqoonsato midnimada mid ka mid ah maareeyayaasheedii hore oo ay u kireysatay shirkad ahaan
Dagaalada PlayerUnknown's waxay jabiyaan diiwaanka Steam waxayna sii wadaan inay koraan
Taasina waa sida PUBG ay mar kale u sameysay, iyadoo garaacday rikoorkii ciyaartoy isku mar ah ee Steam ee Dota2 xukumayay illaa iyo hadda.
Fikradda Honda Urban EV, waa koronto Jabbaan ah oo leh qaab Jarmal ah
Fikradda 'Honda Urban EV Concept' waa gaariga ugu horreeya ee koronto ee shirkadda Japan. Intaa waxaa dheer, rakibidda shabakad koronto caqli leh ayaa sidoo kale la qorsheeyay.
Xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ee Game of Thrones wuxuu yeelan doonaa dhowr dhamaadka la duubay si looga fogaado daadinta
HBO waxay go aansatay inay arimaha ka dhigto mid adag siina daadihi taasna waxay duubi doontaa dhawr dhamaadka dhamaadka xilli ciyaareedka cusub ee Game of Thrones.
Audi Aicon, beddelka iskiis u leh ee Jarmalka oo leh 800 km oo ismaamul ah
Audi Aicon waa fikradda ay shirkaddu ku soo bandhigtay Bandhigga gawaarida ee Frankfurt 2017. Waa mid waasac ah, isboorti iyo casriyeyn ku socota teknolojiyadda.
Kani waa khayaanada cusub ee WhatsApp ee xogtaada lagu xadi doono
Booliska ayaa ka digaya khiyaano cusub oo WhatsApp ah oo ka xadaya xogta shaqsiyadeed dadka isticmaala iyaga oo bixinaya rasiidh qiimo dhimis Zara ah
Waddankee ayaad ka iibsan kartaa iPhone X cusub qiimo jaban?
IPhone X cusubi waa mid rasmi ah oo maanta waxaan idin soo bandhigaynaa qiimaha aaladda cusub ee Apple ee dalal aad u tiro badan oo adduunka ah.
IPhone X, taleefanka ay Apple ku xukumi doonto dhamaadka-dhamaadka
Daabacaadda gaarka ah ee iPhone, oo loo yaqaan 'iPhone X', waxay siisay isbeddel gebi ahaanba xagjir ah wixii aan ku aragnay illaa hadda Apple.
Tani waa sida jiilka cusub ee Apple Watch u eg yahay
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno soo bandhigida jiilka cusub ee Apple Watch, qalab si buuxda loo dayactiray.
Apple ayaa iibin doonta 227,5 milyan oo iphone sanadkan
Tikniyoolajiyada shaashadda OLED ee lagu soo bandhigo iPhone X waxay kor u qaadi kartaa iibka iPhone-ka waxayna ku faafinayaan shaashadan dhammaan warshadaha
Apple's Wireless Charging Pad ma aha Diyaargarow Diyaar ah oo ku saabsan iPhone X
Warbixin daqiiqadii ugu dambeysay ayaa muujineysa in Apple aysan diyaar u aheyn saldhiga lacag la'aanta ah ee kuxiran ee ku habboon iPhone X, iPhone 8 iyo 8 Plus.
IPhone X wuxuu soo bandhigi doonaa processor-kii ugu horreeyay ee hexa-core ee Apple, A11 Fusion
IPhone X wuxuu soo saari doonaa Apple-kiisa ugu horreeya ee processor-ka lixaad leh, A11 Fusion chip, oo leh 2 waxqabad sare iyo 4 koronto-ku-ool
Xiaomi waxaa ku dhiirrigeliya Apple MacBooks waxayna soo bandhigtaa Mi Miisaanka cusub ee Pro
Shirkadda Xiaomi ayaa maanta soo bandhigtay Mi Notebook Pro cusub oo ah kombiyuutar ay dhiirrigelisay MacBook-ga Apple kaas oo qiimihiisu yahay 900 euro.
Xiaomi Mi MIX cusub ee cusub ayaa durbaba rasmi ah oo yimid diyaarna u ah inuu hor istaago calan kasta oo suuqa yaal
Xiaomi waxay soo bandhigtay Mi MIX 2 cusub oo suuqa u imanaya isagoo diyaar u ah inuu hor istaago calan kasta oo maanta la heli karo.
Muxuu noqon karaa daloolka labaad ee ugu weyn madaw ee Milky Way lagu daah furay
Koox ka mid ah cirbixiyeennada reer Japan ayaa hadda ku dhawaaqay daahfurka waxa durba loo arko godka labaad ee ugu weyn madaw ee Milky Way.
Jaguar FUTURE-TYPE, waa sida ay shirkadu u aragto gawaarida sanadka 2040
Weligaa miyaad ka fikirtay sida gawaarida noqon doonaan 2040? Jaguar haa oo waxay soo bandhigeysaa fikradeeda ku jirta Jaguar FUTURE-NOOCA
Shiinaha wuxuu ku shaqeeyaa tareen awood u leh inuu gaaro 4.000 km / saacaddii
Gelitaanka halkaas oo aan ka hadli doonno mashruuca cusub ee Shiinaha ee doonaya inuu abuuro hab gaadiid kacaan oo awood u leh inuu gaaro 4.000 km / h.
Google wuxuu ku dhawaaqayaa dhamaadka barnaamijka Google Drive ee loogu talagalay Mac iyo PC
Codsiyada Google Drive ee Mac iyo PC-ga ayaa la waayi doonaa bisha Maarso ee sanadka 2018 waxaana lagu beddeli doonaa beddelaado cusub oo Google ah
Google waxay hagaajin doontaa kamaradaha Street View sideed sano kadib isla tiknoolajiyad isku mid ah
Google waxay horumarin doontaa kaamerooyinka loo isticmaalo Google Street View. Hada laga bilaabo waxaa suurtagal noqon doonta in la ururiyo macluumaad dheeraad ah oo la xiriira adeegsadaha
Facebook wuxuu diyaariyaa dagaal ka dhan ah YouTube
Facebook ayaa dooneysa inay hor istaagto YouTube-ka waxayna sameyn laheyd inay malaayiin doolar ugu yaboohdo kuwa heysta xuquuqda lahaanshaha muusikada
Nissan LEAF 2018, kani waa korantada cusub ee iibisa inta badan Spain
Nissan LEAF 2018 waa jiilka labaad ee qaabkan. Way ka awood badan tahay, iyada oo leh ismaamul weyn iyo tikniyoolajiyad cusub oo caawimaad leh
Muxuu kumbuyuutarka QWERTY u leeyahay qaab-dhismeedka noocaas ah
Haddii aad waligaa isweydiisay sababta kumbuyuutarka QWERTY uu u leeyahay nidaamkan, maanta waxaan ka hadli doonnaa su'aashan xiisaha badan.
Apple Pay ayaa sii kordheysa, laakiin wali wax yar baa laga helaa Isbaanish
Shirkadda Cupertino ayaa hadda ku dhawaaqday in saddex iyo toban hay'ado deyn oo cusub ay hadda ku biireen barnaamijka Mareykanka.
Shirkadda Tesla ayaa dukaankeedii ugu horreeyay ka furaysa dalka Spain magaalada Barcelona
Shirkadda Tesla ayaa si rasmi ah u xaqiijisay inay ka furanayso dukaankeedii ugu horreeyay dalka Spain magaalada Barcelona. Waxaan sidoo kale horey u haysannay cinwaan meesha laga heli doono.
Sayer, isteerinka caqliga leh ee ka soo baxa Jaguar kaas oo ku raaci doona mustaqbalka
Sayer waa isteerinka casriga ah ee Jaguar ee doonaya inuu raaco dhammaan wadayaasha mustaqbalka si uu u noqdo kaaliyehooda gaarka ah
Reddit waxay ka saareysaa marin uhelka koodhkiisa
Ragga ku jira Reddit waxay go'aansadeen inay ka saaraan marinka koodhka ilaha buuxa ee bogga, oo ah koodh la heli karo tan iyo markii la abuuray
Telegram 4.3 ayaa hadda la heli karaa iyada oo la hagaajinayo cusub oo diyaar u ah in ay sii wadato la-dagaallanka WhatsApp
Telegram ayaa soo cusbooneysiisay cusbooneysiin cusub oo leh horumarin iyo warar xiiso leh, kaas oo lagu sii wado la tartamidda WhatsApp, boqorka farriinta.
Kaarka microSD ee cusub ee Sandisk wuxuu na siinayaa 400 GB oo keyd ah
Sandisk waxay ku soo bandhigtay kaarkiisa microSD-ka cusub IFA 2017, kaas oo noqday warka na siinaya 400 GB oo keyd ah.
Segway miniLITE iyo miniPLUS, moodooyin cusub oo loogu talagalay gaadiidka degdegga ah ee nabdoon
Segway ayaa soo saartay laba mootooyin koronto oo cusub si ay ugu awoodaan inay ku socdaalaan ilaa 35 km hal kali ah. Iyagu waa Segway miniLITE iyo miniPLUS
aragtida caqliga leh EQ fortwo, tani waa sida Daimler u arko mustaqbalka gawaarida gawaarida
Daimler wuxuu leeyahay aragti u gaar ah mustaqbalka gawaarida gawaarida. Waxayna ku sameysaa aragtida caqliga leh EQ fortwo model: gaari koronto iyo iskiis u madax bannaan.
MINI Electric Concept, waa horudhac qaabka korantada oo soo muuqan doona 2019
MINI oo ay weheliyaan kooxda BMW waxay muujiyeen aragti horudhac ah korontada MINI. Kani waa fikradda korantada ee MINI waxaana la iibin doonaa 2019
Kirin 970, waa processor-kii ugu horreeyay ee leh unug Sirdoonka Cilmiga ah
Berri Huawei wuxuu Kirin 2017 ku soo bandhigi doonaa qaab dhismeedka IFA 970, ama waxa la mid ah, processor-kii ugu horreeyay ee wata qeybta Sirdoonka Artificial Arctic.
Alcatel wuxuu soo bandhigayaa Idol 5 cusub oo ku faaneysa naqshadeynta iyo kamaradda qiime jaban
Alcatel Idol 5 cusub ayaa hada rasmi ah kadib markii lagu soo bandhigay qaab dhismeedka IFA 2017 ee maalmahan lagu qabtay magaalada Berlin.
Kuwani waa dhammaan wararkii ay Sony ku soo bandhigtay munaasabaddeeda IFA 2017
Sony wuxuu aad ugu firfircoonaa IFA 2017 qodobkaan waxaan ku tusi doonaa dhammaan aaladaha sida rasmiga ah loo soo bandhigay.
Waxay xadaan xogta isticmaaleyaasha caanka ah ee barta 'Instagram'
Instagram waxay xaqiijineysaa inuu soo gaaray weerar u saamaxay dambiilayaasha inay helaan xogta shaqsiyadeed ee akoonnada caanka ah qaarkood
Waa rasmi, Apple waxay soo bandhigi doontaa iPhone 8 bisha Sebtember 12
Apple ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in bisha Sebtember 12 ay qaban doonto dhacdo aan suurtogal ku arki doonno iPhone 8 cusub.
Sida loo arko loona soo dejiyo buugga IKEA 2018
Buugga cusub ee IKEA 2018 ayaa durba la bilaabay. Waxaan kuu sheegeynaa sida loogu raaxeysto dhammaan wararka inta daabacaadda daabacan ay imaaneyso
Aston Martin wuxuu kaloo iloobaa naaftada iyo baatroolka, dhammaantoodna waa iskudhaf iyo koronto
Aston Martin ayaa ku biiraya isbedelka waxayna dooneysaa in gawaarideedu ay noqdaan kuwo isku dhafan ama si buuxda koronto u shaqeeya bartamaha 2020s
YouTube-ku wuxuu bedelaa astaantiisa wuxuuna ku daraa shaqooyin cusub
Adeegga cajaladda fiidiyoowga ee YouTube-ka ayaa si weyn u beddelaya astaantiisa oo la cusbooneysiiyaa 12 sano ka dib noloshiisa. Tilmaamo cusub ayaa sidoo kale yimid
Kawaran hadaad sigaar cabin laheyd taxanahaaga Netflix?
Intii lagu guda jiray dhacdo gaar ah California, Netflix waxay iibisay marijuana caafimaad oo ay ku dhiirrigelisay qaar ka mid ah taxannadeeda asalka ah
Movea waxay iibineysaa iibinta gawaarida isku dhafan oo cirka isku shareertay 300%
Qorshaha Movea wuxuu ka caawiyay iibinta gawaarida korontada ku shaqeeya iyo kuwa isku dhafan ee isku dhafan ayaa kor u kacaya bisha Ogosto